Dawladda Kenya oo Diiday in la Diiwaangeliyo Ardeyda ka Yimaada dalalka Soomaaliya Iyo Itoobiya | SAHAN ONLINE
Dawladda Kenya oo Diiday in la Diiwaangeliyo Ardeyda ka Yimaada dalalka Soomaaliya Iyo Itoobiya
Dawladda Kenya ayaa maanta amar ku bixisay inaan la diiwaangelin wixii hadda ka danbeeya ardeyda kasoo Tallaabta xadka ay la wadaagto dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ismaaciil Barrow oo ah Agaasimaha Waxbarashada magaaladda Mandheera ayaa BBC u sheegay in amarka lagu joojiyey diiwaangelinta ardeyda uu kasoo baxay Wasaaradda Waxbarashada dalka Kenya.
“Waxaa amarkan uu sheegayaa in ardayda ka yimaada dhanka Soomaaliya iyo Itoobiya oo daris la ah Somalia aan wixii hadda ka dambeeya la diiwaan-gelin karin, balse kuwa hadda waxbarashadu u socoto ay sii wadanay..ayuu yiri.
Agaasimaha Waxbarashada magaaladda Mandheera ayaa sheegay in sababta keentay amarkan uusan waxba kala socon balse uu filaayo iney xiriir la leedahay arrimaha dhanka ammaanka ee Kenya.
Sidoo kale waxa uu sheegay in go’aan yahay mid la gaaray balse uusan sheegi karin in wax laga badelayo iyo in kale ,isagoona hadalkiisa ku daray in ardeyda Kenyaanka keliya Mandheera laga diiwaangelin karo oo keliya.
Agaasimaha Waxbarashada magaaladda Mandheera ma sheegin Tirada ardeyda ka tallaabta Xadka ay Kenya la leedahay dalka Soomaaliya ,waxaana Tallaabadan ay caqabad ku noqoneysa ardey badan oo waxbarasho ka doonayey Mandheera.